Fifidianana Indiana 2009 : Misidina ny kiraro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2018 12:09 GMT
Tsy nanampo mihitsy i Muntadhar al-Zaidi tamin'ny fotoana nitorahany kiraro an'i George Bush hoe ho lasa hiparitaka be manerana ny kaontinanta rehetra io fomba iray nampiasainy hanehoany ny fomba fijeriny io.
Toa efa nipaka hatrany Indià ihany koa io fironana io. Satria araka ny hita, lasa fitaovana nosafidian'ireo ankolafy indiàna ho entina miady ireo kapa tsotsotra ireo mba hanehoana ny alahelo sy hisarihana ny sain'ny maro anatin'ny adilahy politika hindrahindrahin'ireo mpitarika miatrika ny fifidianana izay ho mpikambana ao amin'ny parlemanta.
Ho fanombohana, Jarnail Singh (eto amin'ny sary), mpanao gazety iray, no nanipy kiraro tny amin'ny Minisitry ny Atitany avy amin'ny Fikambanana P. Chidambaram. Romotra izy tamin'ny fanadiovan'ny CBI (NdT: sampana mpanome vaovao) an'i Jagdish Tytler [amin'ny teny Anglisy, toy ny rohy rehetra manaraka ato], iray amin'ireo olona tena noahiahiana voalohany tamin'ilay fidinana an-dalambe fanoherana ny Sikhs ny taona 1984. Efa notendrena ho kandidà avy amin'ny kongresin'i Delhi Avaratra Atsinana sahady i Tytler, fanapahankevitra izay nanetsika ny hatezeran'ny vondrom-piarahamonina sikhe, izay efa niandry nandritry ny 25 taona mba hivadihan'ny pejy amin'izay na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana.
Hoy Rajeev Chandrashekhar nanoratra tao amin'ny blaoginy :
Jarnail Singh sy ny kirarony no namoha anay tamin'ny torimasonay, ka nampahatsiahy anay indray ny habibiana nihatra tato amin'ny renivohitray 25 taona lasa izay, natao tamin'ny vondrom-piarahamonina sikhe – tamin'ny fotoana tsy mbola nisian'ny famoahambaovao amin'ny fahitalavitra sy ireo haino aman-jery hafa fantatsika ankehitriny – habibiana izay nolazaina fa «tsy dia nisian'olona voa firy ».
Tsy nahavoa an'ilay olona nokendrena taminy ilay kiraro, kanefa ren'ny maro ilay hetsi-panoherana natao. Nahatonga fanehoankevitra midadasika amin'ny fihetsehampo manohitra ny kaongresy teny anivon'ny vondrom-piarahamonina sikhe ilay izy, fihetsehampo izay tsy ela dia nitombo be. Satria, tsy nahaleo ny tsindry avy amin'ny mponina ny kaongresy nony farany ka nanàla ny firotsahan-kofidian'i Tytler sy olona iray hafa noahiahiana , Sajjan Kumar,mba hampitoniana ny hatezeran'io vondrom-piarahamonina io.
Nanoratra momba io fiantraikany io i Sharique tao amin'ny blaoginy :
Noho i Muntadar al-Zaid dia nahita fomba iray vaovao hamoahana ny hatezerany ny mponina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Na dia tara aza ny fahatongavany ho an'i George Bush, tonga ara-potoana kosa izany ho an'ny kaongresy. Ny fihetsika nataon'i Jarnail Singh tamin'ny fitorahana ireo kirarony marika Reebok sy ny hetsi-panoherana nanaraka izany nataon'ny vondrom-piarahamonina sikhe no nanery ny kaongresy hanàla ny firosathan-kofidian'i Jagdish Tytler sy Sajjan Kumar.
Kanefa, tsy nijanona teo ny resaka kiraro. Lasa fomban'ny olona rehetra io ftorahana kiraro io. Politisiana maro sy kandidà amin'ny fifidianana no nahazo ny anjara «daka»-ny avy , toa an'i Navin Jindal sy ilay kandidà avy ao amin'ny BJP hilatsaka ho Praiministra, L.K. Advani.
Hoy i Subhasis tao amin'ny blaoginy :
Nanainga ny fanahin'ireo taranaka Indiana aty aoriana i Zaidi ary nampianatra azy ireo ny mety hampiasàna ny kiraro amin'ny fomba tsotra sy tsy ahitan-doza hanoherana ny Fanamparam-pahefana ataon'ny Fanjakàna.
Tsara ho fantatra fa eo amin'ny sehatra politika Indiana hita ho mihamitontongana ny kolontsaina, ny fitanàna ny teny nomena, ny fandraisana andraikitra, ka ny vahoaka tantsaha an-tapitrisany no tena lasibatra. Azo ambara ho tsy manana zo na dia kely aza izy ireo hanoherana ny zava-misy marina ,dia ny fanavakavahana, ny fanararaotana, ny famoretana, ny tsolotra, ny fandrahonana. Inona no azon'izy ireo atao, afatsy ny manipy kiraro ? Farany teo, nitsapa izany ny solombavambahoakan'ny Kaongresy Naveen Jindal sy ny kandidà voaoman'ny BJP ho eo amin'ny toeran'ny Praiministra nandritra ny fivoriana momba ny fifidianana. Toy ny hoe mbola hisy hafa ho avy ihany koa, ka dia manomboka miha kizitina ireo politisiana mahita io fanehoana fahatezerana tsy mbola nisy toa azy io. Mety hoe hain'ireo mpanao fihetsiketsehana sasantsasany tsara ny mikendry. Dia inona ary izany no hiseho aorian'izao ? Miha tonga saina ve izany ny vahoaka Indiana ?
Lasa marika fanehoan'ny mponina ny tsy hafaliany amin'ireo tompon'andrikitra ara-politika ny fitorahana kiraro araka ny hevitr'i Youth ki Awaaz, izay nanoratra hoe :
Any amin'ireo famoriana mpanao gazety sy fampielezankevitra maro, midika ny fanipazana kiraro hoe voaentana izahay , saingy tsy noraharahiana.
Na izany na tsy izany, nirona kokoa nankany amin'ny lafitsarany sy ny lafiratsin'ny rafitra politika ny adihevitra, ary ilay hetsika ataon'izy indrindra koa.
Nanome ny heviny i Speak India Blog :
Raha diso làlana teo aza ry Jarnail Singh sy ireo olona tsy faly, dia bala mihitsy no solon'ny kiraro. Efa manao izay hamadihana ireo olon-tsotra toa an'i Jarnail ho lasa olona adala vonona ny hampiasa herisetra mihitsy ve ny governemanta e? Mihevitra aho fa tsy dia ny governemanta loatra no anton'izao fa ny politika voaloto. Mety tsy ho azo amin'ny alalan'ny fitorahana kiraro ny rariny, fa angamba amin'ny fihetsika misy heviny, dia nisy hetsika (na fandraisana andraikitra) iray nataon'i Jarnail Singh. Na mety na tsia, ianareo no mitsara azy.
Ny hevitr'i Youth ki Awaaz indray dia hoe :
Mifanohitra amin'ny làlam-pitondrantena izao fitorahana kiraro ny politisiana fantadàza sy manankaja maro izao ka tokony ho dinihina lalina. Tsy ratsy ny tsy fitovian-kevitra amin'ny olona iray na ny fanoherana, kanefa kosa tokony hatao am-panajana ny fanehoana izany fanoherana izany. Tsy tokony hihoatra ny fefy mihitsy isika. Misy fomba maro azo hiresahana amin'ilay olona, fa tsy ny fitorahana kiraro mihitsy aloha.
Mila foanana io fomba fanehoankevitra io.
Mitandrina mafy ireo politisiana ankehitriny, na ireo natao hisolo tena na ireo hitondra. Noho ny tahotra ny hanipazàna kiraro, efa naka fepetra hisorohana izany izy ireo mandritry ny fihaonana sy ny fivoriana karakarainy. Araka ny ilazàn'iKamla Bhatt azy hoe :
Manao izay haitàna fomba mahomby hiarovan-tena fatratra ireo politisiana sadaikatra amin'io raharaha io. Araka ny vaovao maro azo, mitady fomba hiarovana amin'io fitaovam-piadiana misidina io ny mpiandraikitra ara-politika Indiana izay antsoin'ireo filazambaovao Indiana hoe «Shoegate».
Mety ho fanipàzana hafatra ilazàna fa tsy te-hijanona ivelany sy tsy te-hangina intsony koa ny filazambaovao Indiana, fa efa te-ho re mazava. Nefa, araka ity hafatra tao amin'ny Twitter ity manao hoe :
Sudeshp : Inona ireto fitorahàna kiraro ao Indià ireto ??? ianareo rehetra, raha tena tezitra tokoa ianareo, mivoaha ary mifidiana ny kandida mendrika amin'ny fifidianana.7:52 hariva 10 Aprily tao amin'ny vohikala.
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny rakotra manokan'i Global Voices mikasika ny fifidianana Indiana 2009.
Ao amin'ny Global Voices amin'ny fiteny Frantsay, jereo ny rakitry ny lahatsoratra tamin'ny : 31/3, 6/4, 8/4/, 15/4/, 16/4, 17/4 sy 21/4.